पृथ्वीनारायण जस्तै बन केपी ओली ! - Dainik Nepal
पृथ्वीनारायण जस्तै बन केपी ओली !
मीनबहादुर पण्डित २०७४ पुष २७ गते ११:२७
– मीनबहादुर पण्डित
बल्ल बल्ल पृथ्वी जयन्ती बनाउन पाइएको छ । यो बीचमा अनेक खिचातानी भए, पृथ्वी जयन्ती मनाउने विषयमा अनेक बहस पनि भए । तर, जनताका सामु शासकको के लाग्थ्यो र ? अन्ततः पृथ्वी दिवस फेरि मनाउन थालिएको छ । यो आफैमा गर्वको कुरा हो ।
हुन त आफू टन्न भ्रष्टाचार गरेर अर्बपति हुने, अनि देश नबन्नुमा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको एकात्मक शासन प्रणालीलाई दोष दिने दुखी आत्माहरु पनि हाम्रो देशमा नभएका हैनन् । त्यो बेला त्यही ठूलो थियो, त्यही सही थियो, त्यसले पृथ्वीनारायण शाहले जे गरे ठीकै गरे । अहिले जे सही छ, त्यही गर, देश अवश्य बन्छ । अहिले देशको हालत बिग्रिनुमा पृथ्वीनारायण शाहलाई दोष दिन मिल्छ ?
यातायात र संचार साधन नभएको त्यो जमानामा १० दिन भोकै हिँडेर पूर्व पश्चिम पुगेर लडाईँ लडेर नेपाल बनाउनु त्यति सजिलो थिएन । त्यो बेला राजालाई लडाईँ बारे सोध्न एक हप्ता लगाएर हिँडेर काठमाडौँ आउन पर्थ्यो, फर्किँदा अरु एक हप्ता लाग्थ्यो । अर्को कुरा पृथ्वीनारायण शाहले अहिले जस्तो बिश्वबिद्यालयमा पढन पाएका थिएनन् । त्यो बेला गुरुकुल शिक्षाको चलन थियो । त्यसैले उनीमा स्कूले ज्ञानको कमी हुनु स्वाभाविक नै हो । र, पनि उनको दिव्य उपदेश पढ्दा उनीमा प्रशस्त ज्ञानको भण्डार थियो भन्ने बुझिन्छ ।
पृथ्वीनारायण देश र जनता सोच्ने राजा थिए। दक्षिणको छिमेकी धूर्त छ होसियार रहनु, नेपाल दुर्इ ढुंगाको तरुल हो, घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् यिनको सर्बश्व हरण गर्या पनि पाप लाग्ने छैन, प्रजा बलियो भए मात्र राजा बलिया हुन्छन् उनका यस्ता उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यदि ४७ बर्षमै पृथ्बीनारायण शाहको स्वर्गारोहण नभएको भए अझ धेरै काम गर्न पाउने थिए, तर धेरै बाँच्न पाएनन् । सायद त्यो बेला अहिले जस्तो आधुनिक उपचार नभएर होला । पहिले जस्तै अहिले पनि अस्पताल नहुने हो भने नेपालका धेरै नेतालाई हामीले गुमाउने थियौँ । मदन भण्डारी बाहेक ४७ बर्षको उमेरसम्म अधिकांश नेताले देशको लागि खासै र चाहिएको योगदान गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पृथ्बी नारायणको आलोचना गर्ने मान्छे इतिहास बुझेको सच्चा नेपाली नै होइनन् ।
यदि पृथ्बीनारायण न भैदिएको भए नेपाल भारतले वा इस्ट इन्डिया कम्पनीले खाइदिने थियो । आज हामीले उनले गर्दा नै नेपाली भन्न पाएका छौँ । उनले घडेरी जोडी दिए, अब आधुनिक घर बनाउने काम त हाम्रो हो नि । क्रिसमस मनाउने तर पृथ्वी जयन्ती नमनाउने ? त्यसैले राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउनै पर्छ अनि उनको सम्मानस्वरूप नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण साहको फोटो राख्नुपर्छ । भारतको नोटमा गान्धीको फोटो छ, अमेरिकाको नोमा लिंकनको, चीनमा माओको, पाकिस्तानको नोटमा जिन्नादको फोटो छ भने नेपालको नोटमा पृथ्वीनारायणको फोटो राख्न्न किन नहुने ? त्यसकारण नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने शक्तिहरुले मात्र पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन् । बाँकीको मनमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति राजा वीरेन्द्रलाइ जत्तिकै श्रद्धा छ । त्यसैले इतिहासलाई गलत व्याख्या गर्नेहरुसँग सँधै सतर्क बनौँ । कसैको पनि भ्रममा पर्न जरुरी छैन् । आफ्नो इतिहास, पुर्खाको गौरव र योगदानलाई नबिर्सौं ।
राष्ट्रप्रेमी नेता केपी ओलीलाई अर्को पृथ्वीनारायण शाह बन्ने अवसर छ । हिजो पृथ्वीनारायण शाह र हाम्रा पुर्खाहरुले अनेक गरेर यो देशलाई जोगाए । अब यो भूमिलाई विश्वकै उत्कृष्ट, नमुना र समृद्ध बनाउने अवसर इतिहासले एकपटक केपी ओलीलाई दिएको छ । किनकी केपी ओलीमा जनताले पृथ्वीनारायणको छायाँ हेर्न चाहेका छन् । यदि सच्चा रुपमा केपी ओलीले काम गर्ने हो भने यो देशलाई कायापलट गर्न सम्भव छ । त्यसैले यो देश बनाउने बेला हो, देशलाई तीव्र विकासको गतिमा अघि बढाउने बेला हो । अब बन्न लागेको सरकारको नेतृत्व गर्दै सच्चा मनले यो देश बनाउने काम केपी ओलीले गरुन् ।